Baiboly samaritana - Wikipedia
Ny Baiboly samaritana na Torah samaritana na Pentateoka samaritana dia ny soratra masin' ny fivavahana samaritana izay tsy ahitana boky hafa ao amin’ny Baiboly jiosy (Tanakh) afa-tsy ny Lalàna (Torah) na ny Pentateoka. Voasoratra amin' ny fiteny hebreo samaritana sy amin’ ny abidy samaritana (karazan' ny abidy hebreo taloha) izany Baiboly izany.
Torah samaritana ao amin'ny sinagogan'i Gerizima.
Misy fahasamihafana ny votoatin' ny Torah hebreo sy ny Torah samaritana.
Ny lehibe indrindra amin’ ireo dia ny fiheverany fa tsy i Jerosalema fa ny tendrombohitra Garizima no toerana masina. Ny Didy folo ao amin’ ny Torah samaritana dia ahitana ao amin’ ny didy faha-10 ny fanajana an’ i Garizima ho ivon-toeran’ny fanompoam-pivavahana. Narindrany hitovy ny Didy folo ao amin’ ny Bokin' ny Eksodosy sy ao amin’ ny Bokin' ny Deoteronomia. Mba hitazomany ny isan’ ireo didy, ny didy voalohany (“Izaho no IHVH Andriamanitrao, izay nitondra anao avy any amin’ ny tanin’ i Ejipta, niala tamin’ ny tranon’ ny fanandevozana") dia heveriny ho fampahafantarana fotsiny, ny didy voalohany ao amin’ ny Torah samaritana dia ny didy faharoa ao amin’ ny Torah jiosy. Ho an’ ny Samaritana, "ny olon-kendry jiosy dia namadika io fampahafantarana io ho didy mba haha folo ny isan’ ny didy tamin’ ny nanitsian’ izy ireo ny Torahny tamin’ ny nanesorany ny fahafolo" mifanandrify amin’ ny tendrombohitra Gerizima. Ny isan' ireo didy ireo dia voalaza ao amin' ny Bokin' ny Eksodosy 34.28.
Ankoatr' ireo fahasamihafana lehibe ireo, dia misy koa ny fahasamihafana maivana momba ny fanoratana ny Torah samaritana sy ny Torah jiosy. Io fahasamihafana io dia mampifanakaiky ny Baiboly samaritana amin’ ny Septoaginta toy izay amin’ ny Torah masoretika.
Foko foko very
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Baiboly_samaritana&oldid=1010307"
Dernière modification le 25 Martsa 2021, à 14:36
Voaova farany tamin'ny 25 Martsa 2021 amin'ny 14:36 ity pejy ity.